दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
यस पृष्ठको सम्पादन दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गरेका हुन् । क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर हुन् । उनको जन्म सन् १९४९ मा स्याङ्जा जिल्लामा भएको हो ।
खाद्यसुरक्षामा भूउपयोग नीति
नेपालका अधिकांश जनता कृषि र त्यससँग सम्बन्धित पेशामा संलग्न छन् । तर, पेटभरि खान नपाउनेको सङ्ख्या पनि ३९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले हिमाली क्षेत्रका ४५ दशमलव २ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आवश्यक क्यालोरी २ हजार २ सय ५० बाट पनि वञ्चित छन् । पहाडमा आवश्यक न्यूनतम क्यालोरी नपाउनेको सङ्ख्या ४१ दशमलव ८ प्रतिशत छ । खाद्यान्न भण्डार मानिएको तराईमा पनि ३७ दशमलव ४ प्रतिशत मानिसले न्यूनतम क्यालोरी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले ‘खाद्य सम्प्रभुता’लाई आधारभूत मानवअधिकारको मान्यता दिएको छ । तर, ‘खाद्य सम्प्रभुता’बारे नीतिनिर्माता पनि स्पष्ट नभएको प्रतीत हुन्छ । देशको नीतिनिर्माण गर्ने, त्यस्ता नीति कार्यान्वयन गर्न रकमको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पाएका एक पूर्वअर्थमन्त्रीले ‘खाद्य सम्प्रभुता भनेको सबै जनतालाई यथेष्ट खाद्यान्न प्रदान गर्ने प्रत्याभूति त होइन ?’ भनेका थिए । वास्तवमा व्यवस्था त्यस्तो होइन । तर, सो अवस्थामा पुर्याउने नीतिको तर्जुमा भने हो भन्नुपर्दछ ।
विश्व खाद्य सम्मेलन १९९६ ले खाद्य सम्प्रभुताबारे उल्लेख गर्दा केही आधारभूत पक्ष औंल्याएको छ । एउटा नागरिकलाई सधैं पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यान्न आफ्नो चाहना र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुनुलाई खाद्य सम्प्रभुता मानिन्छ । उक्त अवस्थामा पुग्नका लागि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति दिने शर्तहरु हुन् ।
जनसङ्ख्या वृद्धि, कृषियोग्य भूमि, अन्य प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता दृष्टिगत गर्दा नेपालमा खाद्यसुरक्षाको समस्या नआउनुपर्ने हो । भूउपयोग नीतिको अभाव, कुलीनतन्त्रीय जोतभोग प्रथा, नतीजामुखी कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा उदासीनता नै खाद्यसुरक्षाका अवरोध हुन् । नीतिनिर्मातामा आफ्नो परिवेशबाट थोरै पनि पर जान नचाहने नयाँ प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन जनताले गरेको बलिदानको सम्मान नेताको भाषणले मात्र हुँदैन । गणतन्त्रमा भैंसी पाल्ने किसानका छोरा राष्ट्रपति बने तर त्यही हैसियत राख्ने किसान-मजदूरका परिवारलाई परिवर्तनले दिएको उपहार भने उल्लेख गर्नयोग्य केही छैन । भूमिको स्वामित्वको अवैज्ञानिकता (माटोमा खेल्नेको स्वामित्व नहुने र स्वामित्व हुनेले माटो नछुने)का कारण कृषि पेशामा विकर्षण पलाएको छ । युवाहरु खाडी र मलेसिया भासिँदै छन् । कामदारले प्रखर दुःख र वेदना सहेर पठाएको विप्रेषण कर्मचारीले पाउने दशैंखर्चजस्तै हो । खाँदा, पिउँदा, स्कूल, अस्पताल गर्दा सकिन्छ । पछि लाभ पाउने गरी लगानी हुँदैन । निर्वाह गर्नकै लागि होनहार युवाशक्ति विदेशिँदा वर्तमानमा आंशिक सन्तुष्टि प्राप्त भए पनि भविष्य अन्धकारमय बन्ने निश्चित छ । माटोले उत्पादन दिने सुनिश्चितता हुनु र उद्योगले तत्काल आन्तरिक आपूर्ति र भविष्यमा निर्यातको आधार बनाउनु दीर्घकालीन लाभका लागि हुन्छ भनी कल्पना गर्ने गरिएको छ । तर, तदनुकूल काम नगर्ने अहिलेको चलन हिउँदमा ‘छेपाराको घाम तपाइ’ मात्र हो ।
यस आर्थिक वर्षको असामयिक बजेट वक्तव्यमा भूउपयोग नीतिबारे बोलिएको छ । वनक्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, कृषि, औद्योगिक, आवासीय र सार्वजनिक भनी ६ वर्गमा जमीनलाई विभक्त गरिएको छ । सिँचाइको सुविधा रहेको खाँटी अब्बल जग्गा ‘घर निर्माण’का लागि टुक्राटुक्रा पारिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । ठूला सिँचाइ आयोजना दक्षिणी छिमेकीको वक्रदृष्टिमा पर्दै गएका छन् । नारायणी लिफ्ट सिँचाइ पम्पबाट पानी तानिए पनि सतहबाट पानी उपयोग गर्न नपाउँदा असफल भएको घटना विस्मृतिमा छैन । तल्लो तटीय हकप्रभावी नेपालको जलस्रोतका कारण विश्व बैङ्क सिँचाइमा ऋण दिन अन्कनाउँछ । सिचाइविना कृषि सप्रँदैन । यस वर्ष धान र मकैको उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा वर्षातको अनुकूलता ठम्याइएको छ । अनिश्चित सिँचाइ स्रोत खाद्यसुरक्षाको भरोसा हुन सक्दैन ।
जनताले चुनेको राजनेता आफ्ना सन्ततिको मनोविनोदका लागि हवाईजहाज वा हेलिकोप्टरको शयर गर्दा लागेको खर्च सामान्य ठान्दछन् । भोट दिने जनता पेटभरि खान, आङ ढाक्न, सामान्य उपचारका लागि पनि योग्य ठानिँदैनन् भने न्यायपूर्ण व्यवस्था आएको रहेनछ भनी किन नठान्ने ? के नीति निर्माताहरु २-३ वर्षका लागि मितव्ययिताको अठोटसहित आर्थिक उन्नतिको पूर्वाधार खडा गर्न तयार छन् ? छन् भने, हालको पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याई बाहय र आन्तरिक स्रोतबाट मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने आर्थिक पूर्वाधार खडा गरी रोजगारी, आयआर्जन र स्वाभिमान कायम गर्नका लागि पहल गरिनुपर्दछ ।
भूउपयोग नीतिले नेपालको बहुआयामिक पर्यावरणको सदुपयोग गर्न सके नेपालीका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल, पशुपक्षी र जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन गर्न सकिन्छ । कृषिका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरी बदलिँदो परिस्थितिमा बाहय जगत्सँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकिन्छ । सरकारले भूमिसुधार कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछ त्यसमा पनि भर पर्दछ । तर, आत्मकेन्द्रित हालको नेतृत्वदायी समूहको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याई जनता र देशका निम्ति फलदायी नीति निर्माण र इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । हिउँदमा पहाड एवम् हिमाली भेकमा हुने खाद्यान्न अभावको शिकार वृद्धवृद्धा, बालबालिका, महिला, भूमिहीन र जनजाति हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा युवाजगत् बाहिरिँदा उक्त वर्गका व्यक्ति सदा खाद्यसुरक्षाबाट वञ्चित रहने भएकाले ‘राशनकार्ड’को व्यवस्था आवश्यक छ । खाद्यान्नको उपलब्धता, पहुँच, उचित प्रयोग र स्थिरताका लागि राज्यको सक्रियता आवश्यक छ ।